वायोडाटा कसरी लेख्ने ? अन्तर्वार्ता कसरी दिने ? Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
वायोडाटा कसरी लेख्ने ? अन्तर्वार्ता कसरी दिने ?
वायोडाटा भनेको पानामा समेटिने व्याक्तिको चिनारी हो। यसमा रहेका विवरणले मात्र नभई यसलाई प्रस्तुत गर्ने शैलीले पनि ब्यक्तित्वलाई प्रतिविम्बित गरेको हुन्छ।
परिणाममुखी व्यक्तिले केवल पानाहरुको संख्या नथपी वायोडाटामार्फत् आफ्‍नो परिचय दिन सक्छन्। वायोडाटाका पनि विभिन्न शैली वा प्रकारका हुने गर्छन्। समसामयिक (कन्टेम्पोरेरी), व्यवसायिक (प्रोफेशनल), आकर्षक(एलिगेन्ट) इत्यादी।
तर, जेजस्तो भएपनि वायोडाटाले व्यक्तित्व झल्काउनुपर्छ। आफ्नो रुची, ईच्छा, धैर्यता र करिअरको उद्धेश्यहरुलाई प्रष्ट रुपमा प्रस्तुत गर्नेखालको हुनुपर्छ वायोडाटा। यसमा आफूले हासिल गरेको नम्बर र ग्रेडहरु भन्दा पनि व्यक्तिले अध्ययनकालमा गरेका गतिविधिहरुले स्थान पाउन जरुरी हुन्छ।
कुनैपनि व्यक्तिले कति ठाउँमा कति वर्ष काम गर्‍यो भन्दा पनि त्यहाँबाट के हाँसिल गर्‍यो भन्ने विषयलाई वायोडाटामा समेट्नुपर्छ। कार्यसम्पादनबाट के नतिजा आयो भन्नेकुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। अनुभव भन्दा पनि कार्यसम्पादन मुख्य कुरा हो। कसैको आफ्नै कुनै संस्था छ भने पनि त्यसलाई उल्लेख गर्न नछुटाउनुहोस्।
वायोडाटा सकभर एक पेजको मात्र बनाउँनुहोस्। करिअरको उद्देश्य, रुची र शौखबाट वायोडाटाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाइँको बलियो पक्ष, गर्व गर्न लायक दक्षता अनि भाषा गत क्षमता र यात्रानुभवलाई पनि यसमा समेट्नुहोस्। शैक्षिक डिग्री, काम गरेको कम्पनीको बारेमा अनि कार्यसम्पादन र उपलब्धिहरुलाई पनि नछुटाउनुहोस्।
अन्तर्वार्ता दिँदा के कुरामा ध्यान पुर्‍याउने?
अन्तर्वार्तामा अन्तर्वार्ताकारले प्रमुखरुपमा तपाइँको स्वभाव र मनोभावलाई बुझ्न चाहेका हुन्छन्। त्यहाँ तपाइँको धारणालाई पनि जान्न खोजिन्छ त्यसैले तपाइँ जुन कामको बारेमा अन्तरर्वार्ता दिँदैहुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रको बारेमा सामान्य ज्ञानहरु बटुलेर मात्रै जानुहोला।
अन्तर्वार्ताकारले तपाइँको दृष्टिकोण र तार्किकतामा ध्यान दिएका हुन्छन्। क्षेत्र र वातावरणको बारेमा आधारभूत ज्ञानसँगै तपाइँ आफ्नो विशेष रुचीको बिषयमा भने गहन ज्ञान बोकेर जानुपर्छ। यसका साथै कुनै कुराको बारेमा तपाइँलाई ज्ञान वा जानकारी छैन भने फेरि अनकनाउन र गलत उत्तर दिनुभन्दा क्षमा माग्दै अनभिज्ञता जनाउन वेश हुन्छ।
हरेक मान्छेलाई हरेक कुरा थाहा हुँदैन भन्नेकुरा उनीहरुले पनि बुझेका हुन्छन्। यदि तपाइँलाई थाहा छ भने आत्मविश्वासका साथ उत्तर दिनुहोस्। मनमा एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने अन्तर्वार्ताकार तपाईंका एक सम्मानित साथी हुन्। यति कुरा मनमा लिएमा आत्मविश्वास पनि बढेर आउँछ।
मुस्कानसहित आँखामा आँखा मिलाएर कुरा गर्नुहोस्। थाहा नभएको कुरा थाहा छैन भन्नुहोस्। कहिलेकाहीँ कुनै अप्रत्याशित प्रश्न आएछन् भने पनि सकारात्मक तवरबाट उत्तर दिनुहोस्। ससम्मान कुरा गर्नुहोस्।
कहिलेकाहीँ अपेक्षा पनि सोध्नसक्छन् त्यस्तो बेला गोलमटोल कुरा भन्दा पनि ठ्याक्कै आफुले अपेक्षा गरेको कुरा भन्नुहोस्। यसले तपाइँको निर्णयशक्तिलाई दर्शाउँछ।
आफ्नो पुर्वकम्पनी, व्यवस्थापन वा सहकर्मीहरुको बारेमा बिर्सेर पनि नराम्रो कुरा नगर्नुहोस्। सन्तुलित प्रशंसा गर्नुहोस्। कहिलेदेखि आउन सक्नुहुन्छ भनि सोधेमा केही समय लिनुहोस्। एकहप्ता, एक महिना इत्यादी। तुरुन्तै आउछु भन्दा तपाईंको अधैर्यता झल्किन्छ।
यसैगरी घरपरिवारलाई सोध्छु। साथीसँग सल्लाह गर्छु पनि नभन्नुहोस्। यसले तपाइँको परनिर्भरता झल्काउँछ अनि व्यवसायिक जीवनमा पनि निर्णय गर्न नसक्ला की भन्ने शंका उब्जाउँछ।
अन्त्यमा अन्तर्वार्ताकारलाई धन्यवाद दिँदै बिदा लिनुहोस्। परिणामको लागि लगत्तै भन्दा एक हप्तापछि सम्पर्क राख्नुहोस्। सकभर उनीहरुले नै सम्पर्क गरेको राम्रो हुन्छ।
२०७७ असोज ०६ गते १८:५६ मा प्रकाशित